Izinkunzi zase-Soweto azikwazanga ukunqoba | Scrolla Izindaba
Izinkunzi zase-Soweto azikwazanga ukunqoba
I-Kaizer Chiefs ne-Orlando Pirates zehlulekile ukuqoqa amaphuzu aphezulu ekhaya emidlalweni yabo ngoLwesibili ntambama. Womabili amaqembu adlale ngokulingana ekhaya ngegoli elilodwa kwelilodwa emidlalweni yabo yangaphambi komhlangano wabo ngoMgqibelo emdlalweni ozobe ubhekwe ngabomvu wase-Soweto.
Amakhosi abanjwe yi-Baroka enkundleni yezemidlalo i-FNB kwathi i-TS Galaxy yadlala ngokulingana namaBhakabhaka enkundleni yezemidlalo i-Orlando. Lezi zinkunzi zase-Soweto zithole amathuba amaningi okuwina imidlalo yazo kodwa zaphoxwa wukungaqedi kahle kwazo.
Bekungathi la maqembu ayakopishelana – ikakhulukazi indlela adedela ngayo amagoli. Omabili amagoli awo avela emaphutheni okuzivikela.
I-Chiefs izithole isijaha lo mdlalo ekuqaleni kwesiwombe sesibili ngemuva kokuthi u-Eric Mathoho ehlulekile ukukhipha umzila webhola elilodwa kunozinti u-Oscarine Masuluke. Lelo bhola lathola ikhanda lika-Evidence Makgopa ngemuva kokushaya uMathoho emoyeni ukuze alifakele uThamsanqa Masiya ukuze athole igoli.
I-Chiefs ikwazile ukuthola elokulinganisa ngegoli likaGoodman Mosele azikore lona kusasele imizuzu eyi-14 ngaphambi kwempempe yokugcina – ivikela ngokuncishwa ukunqotshwa koweligi wokuqala ekhaya kule sizini. UGavin Hunt, nokho, akabanga indoda ejabule.
“Amathuba amaningi alahlekile abengenza ukuthi kubelula ukuthi siwunqoba umdlalo. Sinomdlali wasemuva omude kodwa abakwazanga ukugxuma ukuvikela ibhola. Umphumela uyadumaza. Kufanele sivikele kahle,” kusho uHunt.
UHunt ufake iqembu lakhe eliqine kakhulu – okulindeleke ukuthi libhekane neBucs ngoMgqibelo – ngoba ubengakwazi ukuphumuza noma yimuphi umdlali.
“Izinto zinzima kakhulu kithina ngaphansi kwezimo esibhekene nazo kule sizini. Kodwa kufanele sibhekane nomdlalo ngamunye uma ufika. Okungenani sisasalelwe usuku olulodwa lokulungiselela umdlalo wethu ne-Pirates. Asikaze sibe nokunethezeka okunje isikhathi eside,” kwengeza uHunt.
Ngakolunye uhlangothi, umqeqeshi we-Pirates, uJosef Zinnbauer, uzobathukuthelela kakhulu abadlali bakhe. I-Bucs ihambe phambili ngomzuzu we-10 ngoBongani Sam.
Kodwa ngemuva kwemizuzu eyisishiyagalolunye bavumelene ngekhanda likaMasilake Phohlongo. Abadlali basemuva be-Pirates bahlulekile ukususa ibhola likaLuckyboy Mokoena elithole uPhohlongo ongamakiwe.
“Besilele emuva futhi asikwazi ukukwenza lokho kuleli zinga. Umphumela awenele futhi nokusebenza, yebo, mhlawumbe. Sidinga ukuqina kakhulu phambili futhi kudingeka sisebenze kanzima kulokho ngomdlalo omkhulu ozayo,” kusho uZinnbauer.